Kooxda Barcelona oo guul daro ka bad baaday kaddib markii ay bareejo ka tuugeen kooxda Villarreal + Sawiro – Gool FM
Bashiir April 2, 2019
(La Liga ) 3 april 2019 Kooxda Barcelona ayaa bar baro ka dhaafi weyday kooxda Villarreal oo ka yaabsatay Barcelona markii ay gaarsiyeen ilaa iyo afar gool balse Barca ayaa iska soo guday goolashaas oo ciyaarta bareejo ka dhigtay .
Kulan ciyaareedka qeebtiisa koowaad ayaa lagu kal maray 2-1 oo ay ku hoomineyso Kooxda Barcelona wallow kooxda Villarreal ciyaar aad loo jecleesto qeebtii koowaad ee ciyaarta .
Goolasha waxaa ku horeysay kooxda Barcelona labada goolna waxaa u dhaliyey ciyaartoyda dhalasha wadaaga ee rere Barazil ee Philippe Coutinho iyo da’yarka kale ee Malcom.
Kooxda Villarreal oo ku ciyaareysay garoonkeeda ayaa iska soo celisay gool waxaana u dhaliyey xidigooda lagu magacaabo Samuel Chukwueze daqiiqadii 23-aad ee qeebtii hore ee ciyaarta,natiijada kulan ciyaareedka ayaana noqday 2-1 .
Kulanka qeebtiisa koowaad ayaa gaba gaboobay Barcelona ayaa hurmuudka ciyaarta noqotay , balse markii dib loo soo laabtay qeebtii dambe ee ciyaarta Barcelona waxaa lala ciyaaray kubada caajib ah ugu dambeena waxaa yimid goolkii bareejada .
Daqiiqadii 50-aad ee qeebtii dambe ee ciyaarta xiidga lagu magcaabo Karl Toko Ekambi ayaa dhaliyey goolka bareejada ee ciyaarta kaddib caawin uu ka helay dhaliyihii goolkii koowaad ee ciyaarta Samuel Chukwueze.
Macalinka Kooxda Barcelona ayaa ciyaarta badal ku keenay hogaamiyohooda reer Argentine e Messi kaas oo la nasinayo kulanka Champions League waxaan ciyaarta laga saaray dhaliyaha goolkii koowaad ee ciyaarta ee Philippe Coutinho daqiiqadii 61-aad ee ciyaarta .
Barcelona xaalada ayaa ku sii xumaatay kaddib markii laga dhaliyey goolkii sedexaad ee ciyaarta waxaa goolkaas ka dhaliyey Vicente Iborra kaddib caawin ka timid Manu Morlanes daqiiqadii 62-aad ee ciyaarta .
Carlos Bacca ayaa dhaliyey gool kale oo afaraad kadib caawin uu ka helay xidigii hore ee Kooxda Arsenal Santi Cazorla daqiiqadii 80-aad ee ciyaarta , natiijada ciyaarta ayaana noqotay 4-2 .
Barcelon waxa soo wajahay culees aad u badan balse waxa gool laad xur ah u soo celiyey kabtanka Messi oo ciyaarta ka dhaigay 4-3 , balse nasiib kooxda Villarreal ayaa mar qura aamini weyday in laga dhaliyey gool kale oo afaraad waqtiga dhimashada ee ciyaarta waxaan goolkaas ka dhaliyey Luis Suarez.
Ugu dambeen ciyaarta ayaa ku dhamaatay bar baro 4-4 kooxda Barcelona ayaa sameesayna soo laabsho aad iyo cajiib u ah .
Wolves oo cashar lama ilaa waan ah u dhigatay Kooxda Manchester United +Sawiro